Cetamada | Visuel (mg)
Ilaina ny fahafantarana tsara ireo trozona misy vombo rehefa hanao ny fanaraha-maso azy ireo. Azo atao izany amin’ny alalan’ny fakana sary azy ireo. Singanina manokana ny vombon-drambon’ny trozona izay ahitana ireo marika manokana ampiasaina mba hahafantarana azy.
Azo atao araka izany ny manara-maso ny trozona iray, ahalalana na miverimberina eo amin’ny faritra iray izy ao anatin’ny vanin-taona iray, na maromaro, na isan-taona. Izany rehetra izany no ahafahana mahalala ny taham-piverenan’ny trozona misy vombo eto amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara.
Manana boky mirakitra ireo sary ahafantarana ny trozona misy vombo i Cetamada ary miisa eo amin’ny 3000 mahery eo ny sary ao anatiny.
Ireo sary ireo no ahafahana manisa sy manaraka ireo trozona rehetra izay mivezivezy amin’ny morontsirak’i Madagasikara mandritry ny vanim-potoanan’ny fampitomboana taranaka. Ny fitopolo isan-jaton’ireo sary ireo dia ny mpilatsaka an-tsitrapo siantifika izay nofanin’i Cetamada no naka azy rehefa izy ireo eny ambonin’ny sambo toristika
Nanomboka ny taona 2016, dia nampiasaina ihany koa ny teknôlôjia moderina, toy ny “drone” hoentina manaraka ireo andiana trozona sy hahalalana ireo karazam-pihetsika ataon’izy ireo eny ambony sy any anaty rano tsy dia lalina, ary miankina amin’ny fahazavan’’ny rano no ampiasàna azy. Vokatra tena tsara tokoa no azo amin’ny fampiasana io fitaovana io ary koa tsy manelingelina ireo andiana trozona arahina izany.